New Minecraft Server Online !!! | Site na Linux
mechie | | Egwuregwu
Ndewo onye ọ bụla, ọ bụ n’oge na-adịbeghị anya ka m debere ihe nkesa Minecraft maka onye ọ bụla chọrọ ịbịa nwee obi ụtọ. A na-ahazi ihe nkesa ahụ iji jikwaa ndị ọrụ ntanetị 100 n'otu oge, yabụ echere m na o zuru ezu maka obodo Fromlinux, ọ bụrụ na ịchọrọ ka m debe ụdị ihe nkesa ndị ọzọ maka egwuregwu dịka WoW, Start Craft, wdg, mee ka m mara, ekene m unu niile.
Server: webpagetest.no-ip.org - 174.61.26.252 (ndabere ọdụ ụgbọ mmiri)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Egwuregwu » New Minecraft Server na ntanetị !!!
Ihe 47 kwuru, hapụ nke gị
World of Warcraft sava, n'etiti ndị ọzọ, bụ iwu na-akwadoghị. Njirimara dị a theaa ka igwe nwere ebe ị kwụnyere ya? Olileanya na ọ bụ Them, Bukkit sava ugbu a iwu na-akwadoghị oke; )
Zaghachi Juanjo Salvador
micro: am A10 (2x)
draịvụ ike 1 tb
Sava Bukkit abụghị iwu na-akwadoghị, isi na ya http://www.spigotmc.org/threads/bukkit-craftbukkit-spigot-1-8.36598/.
Ihe nke abuo, obughi nani iji zaghachi gi, kama maka imegharia: Inwere ike itinye ngwa mgbakwunye Obibi? Ọ bụ ezie na ọ na-ekwu na ọ bụ maka 1.6.4 ọ bụ ụgha, ọ ka na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla, ị nwere ike ịgwa m, ebe m nwere sava, ọ bụrụ na mmadụ nwere mmasị, ọ bụ:
Ugbokodo 49 dijo
Ihe nkesa vanilla dị oke. Ọ bụghị viable. Bukkit na spigot abụghị iwu na-akwadoghị, ha mejuputara usoro ọhụrụ iji zere ikesa koodu wolvevation. Ugbu a, anyị ga-achịkọta ihe nke anyị
Ọ dị mma. Kedu njirimara o nwere? Aga m na-enye ya atụ ogho 😀
Enweghị m ike ịbanye. Ọ na-agwa m oge ezighi ezi D:
Amaghị m ihe kpatara na ọ gaghị ekwe ka ị banye, e jikọtara sava ahụ 24/7 ma ọ na-arụ ọrụ nke ukwuu, agbalịrị m ijikọ site na ebe dị iche iche na ndị ọrụ dị iche iche na ọ na-eme ka ọ zuo oke. Lelee na gị minecraft bụ ihe mbụ na ọ bụghị a pirated version ekele
Eleghi anya na ọ bụ ya, m na-eji Mineshafter n'ihi na Minecraft Premium dị oke ọnụ. Ọ na-ekele na ị nwere ike idozi na 😀
Nzaghachi onye ọrụ ibe gị natara ozi "oge invalidity" bụ n'ihi na ihe nkesa minecraft nke onye ọrụ ibe anyị nọgoro anabataghị minecraft gbawara agbawa, ya bụ, ị ga-enwerịrị ya ma ọ bụrụ na ọ bụ ego, mana o zuola na admin setịpụ nhọrọ na "online-mode = ụgha« n'ime faịlụ sava.properties ka onye ọ bụla wee banye, adịchaghị ma ọ bụ.
Daalụ maka ihe nkesa ahụ, m ga-ejikọ n'oge na-adịghị anya, mana ọ na-enyekwu njirimara, ọ bụ IWU? ma ọ bụ CraftBukki?, Kedu ụdị ọ bụ?, Ichoro ihe nkpuchi a kapịrị ọnụ iji nwee ọ worldụ ụfọdụ ụwa ụwa?, na nke kachasị mma, kedu ka m ga-esi mee ka ị mara ihe na ndụ gị? ka ọ bụ na okike mode?
Zaghachi Daniel PZ
Ugbu a, m nwere ike tinye. Ulo olu!
Lee gị ebe ahụ 🙂
Kwesịrị ịdị adị iji banye. Ọ bụrụ na ị bụ, Malitegharịa ekwentị ahụ 🙂
Kedu ihe kpatara ị ga - eji melite minit dị nkenke ...?
Minitest amaghi m nke ukwuu, ana m ahụ onye minitest ka aha ya si kwuo ule
Minecraft na-adị oke oke ọnụ maka ihe ọ bụ, yabụ azụtaghị m ya, agaghị m azụta ya ruo mgbe ọ ga-agbadata ntakịrị.
Minecraft nwere ike iyi ihe dị oke ọnụ, mana ịkwụ ụgwọ € 20 maka ọtụtụ puku awa ị nwere ike ịrara, na vanilla ma ọ bụ na mods, naanị ya ma ọ bụ n'otu ìgwè, echere m na ọ bụ ọnụ ahịa karịrị ego. Ọ bụrụ na enwere ndị na-akwụ € 8 maka tiketi ihe nkiri iji mee onwe ha obi ụtọ 2 awa…, yana ihe karịrị tiketi abụọ, ị kwụrụ ụgwọ maka egwuregwu xD
Ama m na ego anaghị adị mfe, ma ọ bụrụ na ịchekwaa, ọ gaghị adị mgbagwoju anya. N'ezie, ọ bụrụ n'ezie na ị masịrị ya, ị ga-akwụsị ịzụta ya, ọ bụrụ na ị na-egwu naanị n'ihi na ọ bụ egwuregwu ejiji, mgbe ahụ ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na ịchọghị ịkwụ ụgwọ ahụ.
Malite Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) na 2014-12-30 18:31 CST
Nmap nyocha akụkọ maka c-174-61-26-252.hsd1.fl.comcast.net (174.61.26.252)
Onye ọbịa ruru (0.075s latency).
Egosighi: ọdụ ụgbọ mmiri 995 edozi
21 / tcp mechiri ftp
22 / tcp mepee ssh
80 / tcp mepee http
3306 / tcp mepee mysql
9091 / tcp oghe xmltec-xmlmail
Nmap mere: 1 Adreesị IP (1 kwadoro elu) nyochara na 7.38 sekọnd
Dị ka a nche nkwanye, nkpuchi ọdụ ụgbọ mmiri 21 na 22, ọ bụ nnọọ ihe dị ize ndụ iji
daalụ maka ndụmọdụ ahụ afọ ọhụụ
Ndoo maka nkọwa na ọ bụ naanị ndị nwere akaụntụ adịchaghị nwere ike ịbanye, ọ debegoro ya. Banyere njirimara, ọ bụ nsụgharị kachasị ọhụrụ 1.8.1, ọ bụ na ọnọdụ lanarị, ọ nweghị ngwugwu ọ bụla ma ọ bụ ngwa mgbakwunye na ndabara. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka m tinye ihe, ka m mara, kedụ ihe masịrị m bụ na ị na-enwe mmasị n'ihe nkesa na n'ikpeazụ bụ maka gị ekele ... ndụmọdụ ọ bụla ị maara, afọ ọhụrụ obi ụtọ
Tinye plugins enyi (ya na bukki), nke mbu na ihe di nkpa bu “clain” n’ihi na obughi, onye obula nwere ike ibanye ulo onye ozo zuru ihe ha nile, nke abuo, tinye nchedo n’ime akpati na oku, a na m ezuru 2 okuko eghe ha hapụrụ na oven :), agụụ na-agụ m ma na-anwụ: v .. nke atọ ... mgbe ị banyere sava ahụ, ị ​​ga-edebanye aha ya na onye ọrụ yana paswọọdụ, yabụ na ọ nweghị onye ga-abanye na otu onye ọrụ ahụ, ihe gị ga-efunahụ gị / ma ọ bụ larịị, na ngwụcha, nke TP ka ndị mmadụ wee TEPEE site n’otu ebe ruo ebe ọzọ, na-ezipụ ma ọ bụ na-anata TP, nke ahụ bara nnukwu uru, TP na-abịa na bukki n’onwe ya, mana ndị ọzọ ị ga-agbakwunye ee ma ọ bụ ee, mara, ọ dịghị mkpa ka ndị ọrụ nwee ngwa mgbakwunye na ọrụ ha, ebe ọ bụ na ọ bụghị iwu na ọ bụ dị ka ihe ahụ.
Ndị a bụ plugins dị mkpa ị kwesịrị itinye.
Daalụ maka ndụmọdụ mana m ga-agbakwunye na nke ịbanye, achọrọ m ka ụwa dịrị ka ọ dị, ndị mmadụ na-ezu ohi, na-egbu, na-eme ihe ọjọọ na ihe ọma na anaghị m ahụ ọtụtụ mgbagha iji gbochie gị izu ohi na ime ihe enwere ike ime n'eziokwu, Ọ bụrụ na ezuru gị ihe, ọ na-egbu onye zuru ohi ma ọ bụ na ị zuru ohi ya, ka anyị ghara ihe niile bụ rosy na ụwa n'ezie, yabụ ka anyị tinye obere ịnụ ọkụ n'obi na sava a, ekele na ozo, ezi ohuru
Huy, uyuyuyuyuyuyyy, ndị a bụrịrị nnukwu okwu, ndị obodo wow nke linuxers? Ka ndị na-a wineụ mmanya na-achị, enwere m ike ịme Vanilla, BC, Lich na Cata ọrụ. Thedị panda enweghị ụzọ. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ na-egosi egwuregwu bụ nke m masịrị xDDDDDDDDDDD, na ọ bụrụ na PVE biko.
Ebe i gbanwere ya site na 1.8.1 ka 1.7.9 o gaghi ekwe m banye. Ọ na-ekwu "Oge ezighi ezi." ó_ò
Ugbu a, ọ na-agwa m "nyocha enweghi ikike ugbu a maka mmezi."
Ọ naghị ekwe ka m banye, enwetara m otu ozi ahụ ọ na-eme onye ọrụ ibe m n'elu ...: /
Ihe niile adịla njikere, emere m ọfụma iji mee nnwale ụfọdụ mana mana anyị nwererịrị ụdị ọhụụ kachasị arụ ọrụ ...
Ndo maka nsogbu niile ahụ, sava ahụ adịla njikere yana plugins niile etinyere ma ọ na-arụ ọrụ zuru oke mgbe elekere ole na ole gachara ịnwale, ị nwere ike tinye ya na mbipute 1.8 na 1.8.1. Nwee obi ụtọ na ya, site n'ụzọ ị nwere ike ijikọ ndị ahịa 100 n'otu oge ahụ, ana m atụ anya na otu ụbọchị anyị ga-enweta ọnụ ọgụgụ ahụ, na-ekele ma nwekwa obi ụtọ afọ ọhụrụ!
Ọfọn, ọ bụrụ na ị nwaa ike ịmepụta otu n'ime Counter Strike ma ọ bụ Counter Strike: Isi Iyi, mụ onwe m bugoro nkuzi banyere otu esi achịkọta 😀
E wusiri ike Team 2 !!!.
ok aga m arụ ọrụ dabere na nke ahụ
Ihe nkesa na njedebe, enwere m mmasị otú o si gbanwee.
Na njedebe ọ dị ezigbo mma etu m siri na-eme ya. Ọ bụ echiche ziri ezi.
daalụ ma nwee obi ụtọ, na-ekele
Enweela m oge dị mma ụbọchị ndị a, mana enweghị njikwa na trolls na emeela m obi ilu. Echere m na m na-ahọrọ offline ...
Ọfọn, ọ mere. Enyela m ihe m niile Coriano, ka ha ghara ịla n’iyi. Ọ dị njọ maka nsogbu, ma ọ bụghị na mụ na gị niile nwere ọ aụ.
Ndewo ratakill. Peoplefọdụ ndị mmadụ (jacoboiglesias3 na onye ọzọ) na-ebibi ụwa: na-ewere ihe onwunwe n'ụlọ anyị, ha ebibila ụlọ ọha. Ndị emetụtara emetụla sava niile. M na-agbalị igbochi ha ma ha enweghị ike ịbanye. Jiri obi ekele, JCM.
Ndewo JCM achọghị m ịme ihe siri ike na ihe nkesa minecraft, ya bụ, ịghara igbochi ya ma gbochie ya nke ukwuu etinyeghị m nchekwa dị ukwuu, mana m ga-eme mmelite ka onye ọrụ ọ bụla wee kpuchido mpaghara ha ma ọ dịghị onye ma e wezụga ya ịchọrọ ịbanye n'ụlọ gị, bibie ya, wdg. Cheers
Oleekwa mgbe ị ga-eme ya?
Ndewo onye ọ bụla, ihe nkesa ahụ nwere ihe niile dị njikere ka ị ghara ibibi ihe gị, a na-akpọ ngwa mgbakwunye ebe obibi, chọọ n'ịntanetị otu esi akanye akara ebe obibi gị, ebe a bụ njikọ nke onye ndu otu esi eji ya:
(ọ bụ n'asụsụ bekee)
Ugbolu 78 dijo
Daalụ maka ịga n'ihu na-eme ka ihe nkesa ahụ dịkwuo mma! Taa ka m banyere na enweghị m ike ịme ihe ọ bụla, a na-akpọchi ihe niile ewezuga obi m.
Ọ dị sachaa. Anọghị n'ịntanetị ka amasị m.
Daalụ Nke ukwuu enyi ^^
Ozugbo m nwere PC Gamer nke m na-eme atụmatụ ịzụta igwu egwu GamePlays ọzọ site na PC na ọ bụghị naanị site na PS4, M ga-abanye na ihe nkesa gị ^^ (laptọọpụ m tara ahụhụ na-ekpo oke ọkụ 🙁)
N'ezie, ebe ọ bụ na Linux, nke m nwere ohere ịnwale Minecraft na Linux, na dịka egwuregwu ndị ọzọ, ọ na-arụ ọrụ ka mma, ọ bụ ezie na na Gamer PC nke m bu n'obi ịzụta agaghị m achọpụta ọdịiche dị na nke dị mma , mana m na-ahọrọ Linux, ọ na-ahụ ebe obibi siri ike karị maka egwuregwu, ọ dị ka "ha dị obere karịa", Amaghị m etu esi akọwa ya xD
poli lopez ruiz dijo
Ọ ga-amasị m ịnwale ya !!!! Achọrọ m ịmepụta ihe nkesa na minecraft.
Abụ m onye na-agba ịnyịnya.
Zaghachi pol lopez ruiz
ajụjụ na ihe nkesa na-arụ ọrụ?
Kedu oge ọ ga-emechi, kedu oge ọ ga-emepe?
hey enwere m nsogbu icho ijikọ, m ga-ekwu njikọ ekweghị,
otu n’ime egwuregwu kacha mma m hụtụrụla
Mepụta otu ndị ọrụ na Gmail